तौल घटाउने बहानामा नगर्नुहोस् ,यी ७ गल्ती — Imandarmedia.com
तौल घटाउने बहानामा नगर्नुहोस् ,यी ७ गल्ती
काठमाडौँ । मोटोपनाबाट वाक्क भएका मानिस कसरी आफ्नो वजन घटाउने भन्ने ध्याउन्नमा हुन्छन् । यस्तोमा कतिपय अवस्थामा मानिसले यस्ता केहि गल्ती गर्न पुग्छन् जो वजन घटाउने नाममा हानिकारक छन् ।
के के हुन् ती गल्ती ?
१. खान छाड्ने : तौल घटाउँने नाममा धेरैले गर्ने काम भनेको खान छाड्ने हो । यस्तोमा मानिस लामो समय भोकभोकै बस्छन् । तर यो बेकार छ । यसले मेटाबोलिजमलाई सुस्त बनाउँछ साथै शरिर आलस्य र बिरामी बनाउँछ ।
२. औषधीको सेवन : सजिलै तौल घटाउने नाममा केहिले औषधीको सेवन गर्दछन् । तर, यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्दछ । वजन घटाउन पनि सन्तुलित भोजन र व्यायामसँगै पोषणयुक्त खानेकुरा आवश्यक पर्दछ जो औषधीले भरपुर गर्न सक्दैन ।
३. जबर्जस्ती वान्ता गर्ने : केही व्यक्ति मन लागेको खानेकुरा खाएर भोक मेटीएपछि केही बेरमै जवरजस्ती वान्ता गर्छन । तर यसले व्यक्तिमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर पार्दछ । साथै खन्चुवा बनाउँछ ।
४. पखला लगाउने : केहिले मोटोपन घटाउन पखाला चलाउने औषधी खान्छन् । तर लामो समय पखाला लाग्दा शरीरमा पानीको अभाव हुनुका साथै पेट सम्बन्धित अन्य समस्या पनि उत्पन्न हुन्छ ।
५. धुमपान : केही मानिस भोक दबाउन धुमपान गर्छन् । धुमपानले दिमागको संकेतलाई अबरोध गरी भोक मार्दछ । तर, यसले शरिरमा हानी पुर्याउनुका साथै क्यान्सरको जोखिम बढ्छ ।
६. अत्यधिक व्यायाम : मानिसले दुब्लाउन सबैभन्दा झ्याउ मान्ने बिषय भनेको व्यायाम हो । तर केहिले भने अत्यधिक व्यायाम गर्दछन् । परिणाम शरिर घाइते हुन्छ र मुटुमा पनि असर पुग्न सक्छ ।
यस्तै विश्वभर फैलिएको कोरोनाबाट बच्नका लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन जरुरी छ । रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर भयो भने कुनै पनि रोगले छिट्टै आक्रमण गर्छ । रोगसँग लड्ने क्षमता बलियो भयो भने कोरोना जस्ता भाइरससँग शरीरले सजिल्यै लड्न सक्छ । यसका लागि हाम्रो भान्सामा सजिल्यै उपलब्ध हुने विभिन्न खानेकुराहरूको बढी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
पुदीना: यसको पातमा भिटामिन सी, फस्फोरस र क्याल्सियम पाइन्छ । यसले हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउँछ ।
च्याउ: च्याउमा भिटामिन डी लगायत थुप्रै पोषक तत्वहरु हुन्छन् । यो स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन खानामा च्याउ मिसाउनुपर्छ ।
नरिवलको तेल: खाना बनाउनका लागि प्रयोग गरिने तेलहरुको सट्टामा नरिवलको तेलको प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ । नरिवलको तेलको सेवनले शरीरलाई फाइदा मात्रै पुग्दैन यसले शरीरलाई विभिन्न रोगसँग लड्न पनि मजबुत बनाउँछ ।
ब्रोकाउली: ब्रोकाउलीलाई सलाद, तरकारी र सुपको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा भिटामिन, एन्टि ​अक्सिडेन्ट जस्ता गुणहरू पाइने भएकाले यसले शरीरलाई मजबुत बनाउँछ ।
पालक: पालकमा आइरन, भिटामिन र फाइबर पाइन्छ । यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा पनि बिकास गर्छ । पालकलाई तरकारी, सुप, सलाद र जुसको रुपमा खान सकिन्छ ।